Kithi - Hemgrinder
IHemgrinder uhlobo lweShenzhen Gesheng Technology Co, Ltd.
IHemgrinder izimisele umsebenzi olula: ukuhlinzeka ngentengo ephansi kakhulu, imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu, kanye nezici ezithuthukile kanye nomklamo omuhle kakhulu!
Kunemishini yokubumba injekisa engama-20, imishini engama-20 yokujikijela ukushona, i-punch esindayo, i-lathe ye-CNC eqondile, nokukhipha unyaka ngamunye kwezigidi ezingama-20. Imikhiqizo kusuka ekukhiqizweni kuya ekulethweni iyahlolwa, ngentengo kanye nekhwalithi inenzuzo ephelele! Imikhiqizo yethu ithengiswa emhlabeni wonke futhi ithokozela idumela elihle. Ubuqotho, amandla nekhwalithi yeHembrinder's kubonwe ngumkhakha. Siyethemba ukuthola abasabalalisi abaningi abavela emazweni ehlukene.
Kungumgomo wethu ukunciphisa izindleko, ukuthuthukisa ukuncintisana kwezimakethe futhi uzuze izinzuzo zombili kanye nemiphumela yokuwina. Ikhwalithi kuqala, ikhasimende kuqala, ukugxila kobuqotho, ukuthuthukiswa kanye nokwenza izinto ezintsha kuyindlela yethu. Siyakwamukela ukuholwa kanye nokushintshana kwezimboni ozakwabo!
Selokhu lasungulwa, umkhiqizo ubelokhu unamathela ezinhlelweni ezintathu "ezinhle, ukwethenjwa kwamakhasimende, insizakalo enhle". Ukuze uhlangabezane nesidingo semakethe futhi uvikele izintshisekelo zamakhasimende
Ifilosofi yebhizinisi: ubuqotho, ubuhle, win-win!
Umqondo wesevisi: bonke abasebenzisi njengomnyombo!
Uma sibheka emuva esikhathini esidlule, sigcwele uthando, sibheke ikusasa, siyaqiniseka ngokwengeziwe! I-Hemgrinder ihlala ithatha indawo yebhizinisi "yokulandela ikhwalithi ephelele nokwakha imfashini yasendulo", ngesimo senkonzo eqotho, uhlelo lwensiza ephelele nomoya ongapheli wokuqamba
Yamukela amakhasimende ukuthi azokuxoxa, aphenye futhi aqondise!